I-Lenovo Z6 Pro ifumana uhlaziyo olukhulu kunye nenoveli ebalulekileyo | I-Androidsis
I-Lenovo Z6 Pro ifumana uhlaziyo olukhulu kunye nenoveli ebalulekileyo
El I-Lenovo Z6 Pro, ekhutshwe ngaphezulu nje kwiveki ephelileyo, ufumana uhlaziyo olutsha ngenguqulo ye-firmware '11.0.457 .XNUMX '. Kukho utshintsho oluninzi kunye nokuqhubela phambili kwinqanaba elitsha neliphuculweyo leZUI ngeli xesha litsha.
Njenge, U-Lenovo wongeze ubuchule bokufiphalisa i-DC ekulindeleke ukuba bunciphise ukukhanya kwe-Z6 Pro. Isixhobo siyishiyile itekhnoloji yakudala 'ye-PWN-Pulse Width Modulation' yokunciphisa ukukhanya ngenxa yeziphumo zayo ezimbi emehlweni abasebenzisi.
Uhlaziyo lwamva nje lukwangumboniso wohlaziyo lwempilo 'U'. Izisa amanqaku amatsha, njengokongezwa kotshintsho olwenziweyo ukutshintsha imo yendawo yasebusuku njengoko kufuneka, ikhadi lomthunywa lokulandelela umthunywa ngexesha lokwenyani, kunye ne-HDR10 Ultra HD portal yokubona ngempompo enye.
Kukho utshintsho kwi-UI yewijethi yokukhangela yehlabathi, kwaye ngoku abasebenzisi banokuhlala behlaziyekile ngeendaba zamva nje.
Olunye utshintsho lubandakanya ukongezwa kwe icon yebhetri yepesenti, ukuboniswa kwescreen esigcweleyo, kunye nokuphuculwa kwenkqubo yokupholisa ulwelo 'eColdfront' yokusebenzisa izixhobo ngokufanelekileyo. Ukongeza, iphucula uzinzo lwekhamera ngamava omsebenzisi aneenkcukacha kwaye ilungisa imiba enje ngokuqhwanyaza kweapp, ukungqinisisa inyathelo lempilo, kunye nempazamo yokulawulwa kwebhetri.
Uhlaziyo luphucula inkqubo yokwenza ngokwezifiso kwiLenovo Z6 Pro. Luhlaziyo oluphambili olujolise ekuphuculeni ukusebenza kunye nokusebenza kwesixhobo. Oku kuyakukhusela namehlo akho kwi-DWM engaqhelekanga, kunye nendlela entsha yokufiphalisa iDC.
Amanqaku e-AnTuTu kwiLenovo Z6 Pro abonakalisiwe
Uhlaziyo lwe-ZUI 11.0.457 luqhutywa e-China kwaye inobunzima obungama-270.54 MB ngobukhulu. Abasebenzisi, kwiiforamu ezahlukeneyo, baxela koku. Kungathatha ixesha ukufikelela kwiyunithi nganye kunye nokusasazeka kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Lenovo Z6 Pro ifumana uhlaziyo olukhulu kunye nenoveli ebalulekileyo
Emva kweminyaka eli-18 eGoogle nakwiAlfabhethi, uEric Schmidt urhoxile kwisikhundla sakhe
Ukuthengisa kukaHuawei kuyenyuka kwikota yokuqala